Fekitari Yekuchenesa Mbeu & Kugadzira Michina - China Kuchenesa Mbeu & Kugadzira Machina Vagadziri neVatengesi
5xzs-40ds Kuchenesa Mbeu & Kugadzira Muchina
5XZS-40DS Mbeu Yekuchenesa & Kugadzira Muchina une kaviri kuchenesa mhepo, kuchenesa sieve, uye giravhiti yekuparadzanisa mabasa. Iyi modhi ine akawanda mabasa pane imwe nharembozha yekuchenesa mbeu inoita kuti ive yakanakira kushandiswa kwakakura. Uye ine 30-35 toni paawa kugona, iyo inozivikanwa kune chikamu chekuchenesa zviyo.
5xzs-10d Kuchenesa Mbeu & Kugadzira Muchina
Iyo 5XZS-10D Mbeu Yekuchenesa & Kugadzira Machine's basa: kudhonza gorosi (kusarudza), kuchenesa mweya, vibration sieve pre-kuchenesa, giravhiti kupatsanura.
Muchina Wekuchenesa & Kugadzira Mbeu 5XZS-10DS
Iyo 5XZS-10DS Mbeu Yekuchenesa & Kugadzira Muchina basa: kudhonza gorosi (sarudzo), kuchenesa mweya, vibration sieve pre-kuchenesa, giravhiti kupatsanura uye vibration sieve kuchenesa.
5XZS-10DGT Kuchenesa Mbeu & Kugadzira Muchina
Iyo 5XZS-10DGT Mbeu Yekuchenesa & yekugadzira muchina wakagadzirwa zvakasarudzika nekuchenesa mhepo, giravhiti kupatsanura, vibratory sieve kupatsanura uye giredhi inokwirisa kuchenesa mashandiro, kuderedza kusakara uye kubvarura uye nyore kubviswa & shanduko.
5XZS-20DS muchina wekuchenesa zviyo wechibage chesame